Ogaden News Agency (ONA) – Doorashadii Gudiga Qoxootiga S.Ogadenia ee dalka Yemen oo guul ku soo dhamaaday
Doorashadii Gudiga Qoxootiga S.Ogadenia ee dalka Yemen oo guul ku soo dhamaaday
Posted by ONA Admin	/ December 23, 2013
Maalinimadii Jimcaha oo ay taariikhdu kubeegnayd ,20/12/2013 ka waxay ahayd maalin aan horay u soomarin Qoxootiga S.Ogadenia ee kunool dalka Yemen, gaar ahaan caasimadiisa Sana’a. Waxay ahayd maalin xamaasad iyo walwal badnayd oo qof waliba islahaa toloow madhabaa in lays dooranayo oo aydadku galayaan safaf dhaadheer. Abooyinoow nabadgaliyo maku dhacaysaa doorashadu eleen waligeen maynaan arag doorasho wax la yidhaahdee. Cajab dadkan Aad moodo inay Ogadenia oo xora joogaan miyay is ogyihiin meesha ay joogaan. Erayadaasi waa ku wii aydadku isla dhexmarayeen.
Aroortii hore ee jimcaha waxaa saacadu markay ahayd 9:oo subax nimo ee Bariga Dhexe loo dareeray codbixinta doorashada gudiga qoxootiga S.Ogadenia ee dalkaYemen, iyadoo lagu codaynayay xarunta Soomalida Ogadenya ee Sana’a. waaxaa goobta soo xaadiray Hay’ada UNHCR Madaxdeeda ugu saraysa dalkaYemen iyo Hay’ada IDR, oo iyadu ahayd Hay’ada qaadatay fulinta mashruuca doorashooyinka loo qabtay qoxootiyada ku nool dalkaYemenoo ah Hay’ad dawli ah aadna ugu firfircoon hawlaha qoxootiga. Waxaa kaloo hawsha goobjoog ka ahaa DawladaYemenwasaaradaheeda kala duwan.Wasaarada Arimaha Dibada, mida Gudaha laamaha Amniga, Haya’adaha Xuquuqul Insaanka, Qaybta jinsiyadaha iyo socdaalka .
Hadaba doorashada Gudiga Qaxootiyada S.Ogadenina lagu doortay ayaa ka duwanaa noocyada kale ee doorashooyinka qoxootigu uga dheceen Sana’a, taasoo ahayd in latartansiiyo laba musharax oo kaliya oo midkiiba wato Gudigiisii lashaqayn lahaa haduu codka ku guulaysto. Arintan oo ay dawlada Yemen iyo Hay’aduhuba aad iyo aad ugu bogaadiyeen bulshada Ogadenia oo muujiyay bisayl siyaasadeed oo ka duwan doorashooyinkii kale ee dalka loogu qabtay qoxootiyada Somaliyeed oo lagu saleeyay Nidaam beeleed (qabiil) 4.5 iyo wax la mid ah. Waxaa kaloo loo hambalyeeyay Gudigii hore ee hawsha soo wadi jiray iyo gudigii Odayaasha ee loo xilsaaray soo agaasimida doorashada Biladna lagu siiyay.
Ugu dambaytii waxaaa guul ku soo dhamaatay doorashadii oo ay kow tahay Gudi Qoxooti oo ay si rasmiya u aqoonsato dawladii Yemen. Waxaana la odhan karaa waa guul usoo hoyatay umda dulman ee inbadan raadinaysa xaqeeda.